Fahaverezana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-04 mpandimby ny Magazine > Fatiantoka. , ,
Rehefa nanangona ny akanjoko nandritra ny dia aho, dia nahita aho fa lasa ny palitao ankafiziko ary tsy mihantona ao amin'ny efitranoko toy ny mahazatra. Nikaroka tany hatraiza aho nefa tsy nahita. Tsy maintsy navelako teo amin'ny hotely iray izy tamin'ny dia iray hafa. Noho izany dia nofonosiko ny tampony mifanandrify, ary nahita zavatra hafa azoko zakako tsara.
Tsy te ho very zavatra aho. Manelingelina sy mampivonto ny hozatra, indrindra rehefa mendrika zavatra. Ny fahaverezan'ny zavatra dia manelingelina ny voa, toy ny manadino ny toerana ametrahanao ny zavatra, toy ny fanalahidy na ny taratasy manan-danja. Ny fahazoana mandroba dia ratsy kokoa. Mahatsiaro ho tsy afa-manoatra ianao ary tsy afaka mifehy ny fiainanao. Ny ankamaroan'ny fotoana dia tsy misy na inona na inona azontsika atao fa manaiky ny fahaverezana ary mandroso.
Ny faharesena dia ampahany amin'ny fiainana izay aleontsika tsy misy, saingy miaina izany isika rehetra. Ny fiatrehana sy ny fanekena ny fahaverezam-bidy dia lesona tsy maintsy ianarantsika mialoha sy matetika. Saingy na dia amin'ny fahanterana sy amin'ny traikefa amin'ny fiainana ary ny fahafantarana fa mora soloina ny zavatra, dia very maina ihany ny fahaverezany. Ny fatiantoka sasany, toy ny fahaverezan'ny sweater na ny lakile dia mora kokoa ny ekena noho ny fatiantoka lehibe kokoa, toy ny fahaverezan'ny fahaizana ara-batana na ny olon-tiana iray. Amin'ny farany dia misy ny fahaverezan'ny fiainantsika manokana. Ahoana no fomba hitandremantsika ny fomba fijery mety? Nampitandrina antsika i Jesoa mba tsy hametraka ny fontsika ary hanantena ny harenan'ny hebreo, harena very, nangalatra na hodorana. Tsy izay ananantsika no fiainantsika. Tsy refesin'ny vidin'ny kaontinay ny lanjanay ary ny joie de vivre dia tsy vita amin'ny fanangonana entana. Ny fahaverezan'ny maharary kokoa dia tsy mora azo hazavaina na tsy diso anjara loatra. Vatana antitra, fahaizana sy saina mandositra, ny fahafatesan'ny namana sy ny fianakaviana - ahoana no ifandraisantsika izany?
Mihena ny fiainantsika ary misy farany. Izahay dia tahaka ny voninkazo izay mamony amin'ny maraina sy malazo nony hariva. Na dia tsy mampahery aza, dia izao no tenin'i Jesosy: Izaho dia fitsanganana amin'ny maty sy fiainana. Amin'ny alàlan'ny fiainany dia afaka manavao sy manavao ary hanavotra antsika rehetra isika. Ao anatin'ity hira ao amin'ny hira taloha ity dia milaza hoe: Satria velona i Jesoa dia miaina rahampitso koa aho.
Satria velona izy izao, fatiantoka ankehitriny. Ny ranomaso rehetra, ny kiaka rehetra, ny nofy rehetra, ny tahotra rehetra sy ny alahelo rehetra dia esorina ary soloina an'i joie de vivre ary fitiavana ny rainy.
Ao amin'i Jesosy ny fanantenantsika - amin'ny rany manadio, ny fiainana atsangana ary ny fitiavana rehetra. Namoy ny ainy ho antsika izy ary nilaza fa raha resy ny aintsika dia hahita azy ao aminy indray. Ny zava-drehetra dia very eto amin'ity lafiny ity amin'ny lanitra, fa ny zava-drehetra dia hita ao amin'i Jesosy ary rehefa tonga io andro sambatra io dia tsy hisy ho very intsony.